Idozi Nsogbu Okwu Messenger
Nwalee ọkà okwu gị na ntanetị wee chọta ntuziaka iji dozie ya
Okwu mmalite nke ngwa ịntanetị Ule Okwu
Nnwale okwu okwu na-enye gị ohere ịnwale ọkà okwu gị na ntanetị, ozugbo na ihe nchọgharị gị. Ọ na-enyekwa ntụziaka banyere otu esi edozi okwu okwu gị n'ọtụtụ ngwa olu na oku vidiyo na ọtụtụ ngwaọrụ.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara na onye na-ekwu okwu gị agaghị arụ ọrụ. Nwere ike ịnwe nsogbu okwu okwu ma ọ bụrụ na etinyere ngwa na-ekwu okwu nke ọma. Ma ọ bụ ọkà okwu nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ ọ bụla na ngwaọrụ gị, n'agbanyeghị ngwa ị na-eji.
Nkwupụta ụda okwu na-enye gị ohere ịnwale ma ọ bụrụ na achọpụtara ọkà okwu gị ma rụọ ọrụ nke ọma na ngwaọrụ gị. Yabụ ị nwere ike ịrụ ọrụ ma ọ bụrụ na okwu okwu gị sitere na ngwaọrụ gị n'onwe ya ma ọ bụ site na iji ngwa okwu ahụ. Kedu ụzọ ọ bụla, anyị nwere ntuziaka maka otu esi edozi nsogbu okwu gị.
Mgbe ịmalitesịrị ule ahụ, gbaa mbọ hụ na ọkwa ụda gị dị elu. Kwesịrị ịnụ egwu sitere na ọkà okwu ndabere gị. Ga-ahụkwa menu ndozi na-enye gị ohere ịhọrọ ndị ọkà okwu ndị ọzọ (ọ bụrụ na ụfọdụ dị na ngwaọrụ gị). Yabụ, ịnwere ike ịnwale ndị ọkà okwu niile na ngwaọrụ gị. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnụ ụda ọ bụla, lelee ntuziaka ndị akọwapụtara na ngwaọrụ gị na ngwa gị.
Họrọ ngwa na ngwa iji chọta ntuziaka akọwapụtara iji dozie nsogbu okwu gị
Njikọ ọsọ ọsọ